Ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia miaro ny ankizy manerana ny indostria amin'ny Vovonana Iraisam-pirenena
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kolombia » Ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia miaro ny ankizy manerana ny indostria amin'ny Vovonana Iraisam-pirenena
Ny solontenan'ny governemanta manerantany, ny orinasam-pizahantany, ny maso ivoho mpampihatra lalàna, ny ONU ary ny fiarahamonim-pirenena dia mivondrona ao Bogotá anio mba hanaiky ny fandaharam-potoana maharitra sy ny hetsika hampitsaharana ny fanararaotana ara-nofo sy fanararaotana ataon'ny ankizy amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
The Fihaonana an-tampony iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany, natolotry ny Governemantan'i Kolombia miaraka amin'ny Vondron'asa Miasa Ambony amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany; UNICEF; UNODC; WTTC sy ECPAT International dia hiaraka handray mpandray anjara maherin'ny 400 avy amin'ny firenena 25 hanolo-tena amin'ny hetsika nohamafisina. Anisan'izany ny fampanantenan-tsaina hanentanana momba ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy; fiatrehana ny fanondranana ankizy an-tsokosoko; fanajana ny fitsipi-pitondrantena; mifehy ny 'voluntourism' any amin'ireo andrim-panjakana misy ny ankizy; ary fampitomboana ny fampiofanana ny mpiasa hahafantatra rehefa tandindomin-doza ny fanondranana olona an-tsokosoko na fanararaotana ara-nofo ny ankizy.
"Ity Fihaonana an-tampony ity dia ohatra iray amin'ny fanoloran-tenan'ny governemanta Kolombiana amin'ny fizahan-tany tompon'andraikitra" hoy i Sandra Howard Taylor, minisitry ny fizahantany lefitra avy amin'ny governemanta Kolombiana, ary tompon'andraikitra tamin'ny hetsika. “Miezaka izahay mba hisorohana ny fanararaotana ny ankizy amin'ny fizahantany. Ny vokatra lehibe indrindra amin'ity fihaonana an-tampony ity dia ny fanaovan-tsonia ny fanambarana avy amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, hampiharana ny politika sy ny hetsika hiarovana ny ankizy. Firenena malaza amin'ny fanao tsara amin'ny fizahan-tany i Kolombia ary efa nanao hetsika maro, anisan'izany ny fiarovana ny ankizy. Saika ny orinasam-pizahan-tany rehetra any Kolombia, manodidina ny 25,000 eo ho eo, no nanatevin-daharana ireo fandaharan'asan'ny fizahan-tany an'ny governemanta mba hisorohana sy hamaliana ny fanararaotana ataon'ny ankizy. ”
Ny solontena dia antenaina hanaiky ny drafitra iray, mifanaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny fampandrosoana maharitra 2030 mba hampiharana ny tolo-kevitry ny Fandalinana manerantany momba ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany. Betsaka amin'ireo tamin'io fihaonana an-tampony io no manentana ny governemanta, ny sehatra tsy miankina, ny sampandraharaha mpampihatra lalàna, ny masoivohon'ny Firenena Mikambana ary ny fikambanana fiarahamonim-pirenena mba hiaro tsara kokoa ny ankizy amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko sy fanaovana firaisana amin'ny ankizy. Anisan'izany, indrindra, ny fandrindrana bebe kokoa eo amin'ny governemanta sy ny indostria.
Raha niresaka tamin'ny anaran'ny World Travel & Tourism Council (WTTC), ny manampahefana manerantany momba ny fandraisana anjara ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'ny dia sy fizahan-tany, Helen Marano, filoha lefitra mpanatanteraka, dia naneho hevitra hoe: "Ny Summit anio dia dingana lehibe iray amin'ny fanekena ireo orinasa maro izay dia mpandray an-tsokosoko ao amin'ity sehatra ity amin'ity olana lehibe ity. Izy ireo dia mitaona aingam-panahy ho an'ny orinasa rehetra handray ny filan'ny fiarovana ny zaza amin'ny fiofanana sy ny asa isan'andro. Ny fanoloran-tena izay holazaina amin'ny fanambarana dia hiteraka fiaraha-miasa matanjaka. Ny WTTC dia mijoro ao ambadiky ny fanoloran-tena matanjaka miaraka amin'ireo Mpikambana ao amin'ny Filankevitra hanohana ny filàna ilaina amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny endriny rehetra manerana ny indostrian'ny Travel and fizahan-tany. Mirehareha izahay amin'ny fiaraha-miasan'ireo mpandray anjara amin'ny Fihaonana an-tampony ary mamporisika ireo mpikambana ao amin'ny indostria hanaraka izany. ”
Ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia nitombo be tato anatin'ny taona vitsivitsy. Izy io dia mandray anjara 10.4 isan-jato amin'ny harin-karena faobe global sy asa 1 amin'ny 10, miaraka amin'ny tombana 4 isan-jato eo ho eo ny fitomboana ao anatin'ny folo taona. Ny UN World Tourism Organisation dia manangana mpizahatany 1.8 miliara amin'ny 2030. Ity fitomboana ity dia manome fidirana malalaka sy mora kokoa ho an'ny mpandeha rehetra ary manasongadina ny filàna fepetra lehibe kokoa hiarovana ny zaza.
Firenena maro no tsy manana lalàna ampy hanakanana na hanakanana ireo mpandika lalàna momba ny firaisana ara-nofo amin'ny zaza mpandehandeha, izay manararaotra matetika ny fahantrana, fanilihana ara-tsosialy ary ireo lalàna malemy izay manome kolontsaina tsy manan-tsimatimanota. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny fitomboan'ny fanavaozana ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia nampidi-doza. Ho fanampin'izany, ny Internet dia manamora ny fidirana amin'ny safidy fitsangatsanganana, nefa afaka mamela ny loza ateraky ny mpanitsakitsa-janaka manao dia lavitra amin'ny zaza hitrandrahana.
Ho an'ireo sisa velona amin'ny fanararaotana ara-nofo, ny lova dia misy fahasimbana ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-tsaina mafy sy maharitra. Ity dia heloka bevava manapotika ny vondrom-piarahamonina, manimba ny fianakaviana sy ny fahamendrehana ara-kolontsaina ary manimba ny fanantenana ara-toekarena ho avy amin'ny vahoaka manontolo.
Mavitrika ny raharaha. Am-polony taona vitsivitsy lasa izay, ny fiheverana manjaka dia ny mpandika lalàna momba ny firaisana amin'ny zaza an-tongotra dia avy amin'ny firenena tandrefana fotsiny ary nankany amin'ny tany mahantra sy mandroso. Androany, fantatsika fa manjavozavo ny tsipika misy eo amin'ny firenena aleha, ny fitaterana ary ny loharano ary ny mombamomba ireo mpandika lalàna dia samy hafa.
Satria olana iraisan'ny sisintany sy sisintany ity, ny famaranana ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany dia mitaky fiaraha-miasa eran-tany sy fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra rehetra. Ilaina ny miala amin'ny valinteny miaro ny ankizy sombintsombiny amin'ny firenena tsirairay mankany amin'ny fomba feno. Ny Vovonana Iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Bogotá, Kolombia dia ezaka hanangonana mpitarika mihoatra ny 50 manerantany avy amin'ny governemanta, sehatra tsy miankina, masoivoho mpampihatra lalàna ary fikambanana fiarahamonim-pirenena hahatratra izany.
Ny fihaonana dia tohin'ny Fandalinana manerantany momba ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany, ny ezaka natambatra voalohany nataon'ny mpiara-miombon'antoka 67 hahatakatra ny toetoetran'ity asa ratsy ity. Ny fanadihadiana dia nametraka ny tolo-kevitra izay mitaky hetsika iraisana avy amin'ny ONU, governemanta, ONG, polisy, ary orinasa mifantoka amin'ny fizahan-tany. Ny fivoriana dia handray marimaritra iraisana amin'ny fomba fampiharana bebe kokoa ireo tolo-kevitra ireo.
Ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra sy ny fandaharam-pianarana 2030 dia misy tanjona kendrena manokana amin'ny fizahan-tany maharitra sy ny famaranana ny herisetra atao amin'ny ankizy. Ny Vovonana dia hamorona sori-dàlana izay ifanarahan'ny mpiray antoka rehetra hanolorany tena mba hanatanterahana ny Agenda 2030.
Momba ny WTTC: Ny World Travel & Tourism Council dia fahefana manerantany amin'ny fandraisana anjara ara-toekarena sy sosialy amin'ny Travel & fizahan-tany. Mampiroborobo ny fitomboana maharitra ho an'io sehatra io, miara-miasa amin'ny governemanta sy ny andrim-panjakana iraisam-pirenena hamoronana asa, hitondra ny fanondranana ary hiteraka fanambinana. Isan-taona ny WTTC, miaraka amin'ny Oxford Economics, dia mamoaka ny tatitra momba ny toekarena misy ny toekarena, izay mijery ny tombony ara-tsosialy amin'ny Travel & fizahan-tany eo amin'ny sehatra manerantany, isam-paritra ary ny firenena. Tamin'ity taona ity ny tatitra dia mampiseho angon-drakitra momba ny vondrona isam-paritra 25 sy firenena 185. Ny sehatra dia manome 8.3 trillion US $ na 10.4 isan-jaton'ny harin-karena faobe (GDP) manerantany, raha vantany vao raisina avokoa ny fiantraikany mivantana, tsy mivantana ary mitaona. Ity sehatra ity dia mitaky asa 313 tapitrisa na iray amin'ny folo amin'ireo asa rehetra eto ambonin'ny planeta.
Momba ny UNICEF: UNICEF dia miasa amin'ny toerana sarotra indrindra eto an-tany, hahatratrarana ny ankizy sahirana indrindra eto an-tany. Manerana ireo firenena sy faritany 190, izahay dia miasa ho an'ny ankizy tsirairay, na aiza na aiza, hananganana tontolo tsaratsara kokoa ho an'ny rehetra. Araho ny UNICEF amin'ny Twitter ary Facebook
Momba ny UNODC: Ny biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny zava-mahadomelina sy misahana ny heloka bevava dia mpitarika manerantany amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina tsy ara-dalàna sy ny asa ratsy iraisam-pirenena. Izy io dia miasa amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny tambajotram-birao midadasika. Tafiditra ao amin'ny asany ny fanampiana ireo fanjakana hanamarina sy hampihatra ireo fifanarahana iraisam-pirenena mifandraika amin'izany ary hamolavola lalàna momba ny zava-mahadomelina, fampihorohoroana ary heloka bevava toy ny fanondranana olona. Hatramin'ny 2015, UNODC dia nitarika programa antsoina hoe "Hetsika manerantany hisorohana sy hiatrehana ny fanondranana olona an-tsokosoko", vatsian'ny Vondrona eropeana ary ampiarahina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny International Organization for Migration sy UNICEF, izay mahatratra firenena 13 manerana an'i Afrika , Azia, Eoropa Atsinanana ary Amerika Latina. Ity asa ity dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pandrosoana maharitra maharitra 2030, izay mitaky ny fampitsaharana ny fanondranana olona an-tsokosoko sy herisetra atao amin'ny ankizy.
Momba ny vondron-kery avo lenta momba ny fiarovana ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany: Ny vondron-kery avo lenta dia nitarika ny fampandrosoana ny Global Study on the Sexual Exploitation of Children in Travel and fizahan-tany. Ny andraikiny dia ny fanafoanana ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy amin'ny alàlan'ny fampiharana ny tolo-kevitry ny fanadihadiana manerantany.
Momba ny ECPAT: ECPAT International dia tambajotra manerantany an'ny fikambanana natokana hamaranana ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy. Miaraka amin'ny mpikambana 100 mahery any amin'ny firenena 93, ny ECPAT dia mifantoka amin'ny fampijanonana ny fanondranana ankizy an-tsokosoko hanao firaisana; fanambadiana an-janaka an-tery aloha; fanararaotana ara-nofo amin'ny zaza an-tserasera; ary ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny Sekretera iraisam-pirenena ECPAT dia miorina ao Bangkok Thailand. Raha mila fanazavana fanampiny, mankanesa any www.dapatf.org
Fandresena noho ny fitiavana sy ny fizahantany: Nofoanan'ny Fitsarana Tampony Bermuda ny fandrarana ny fanambadiana amin'ny samy lahy na samy vavy
Filankevi-pirenena momba ny fiarovana: ny zaza amerikana maty ary ny ray aman-dreny kosa mandositra izany